Umkhiqizi nomhlinzeki | I-CCMIE
Ubukhulu. ephakamisa umthamo: 37 ton
Amandla Enjini: 371hp Euro II
Iloli ubukhulu: 9800mm * 2500mm * 4100mm
Ama-asi: ama-asi ama-4
ITire: amayunithi ayi-12
Ubukhulu. isivinini: 90km
Ilifti eseceleni: MQH37 (ATP)
I-CCMIE ikhiqiza iTruck Mounted Container Side Loader Lifter ebekwe ku-8X4 chassis, imvamisa siyifaka kuSinotruck chassis, ku-IVECO chassis, noma efakwe ku-20ft semi trailer. I-Truck Mounted Container Side Loader Lifter ingasetshenziselwa ukulayishwa nokulayishwa kwesiqukathi esingu-20ft ngomthamo wokuphakamisa amathani angama-37. I-CCMIE Truck egibele Isitsha Side Loader Lifter
ngesilawuli kude sedivayisi engenantambo futhi ungasebenzisa i-crane ngesandla
Umsebenzi wethu we-CCMIE ukuba ngumhlinzeki wemishini ethekwini omusha wezinto zobuchwepheshe zedijithali nezokuxhumana ngokunikeza ngemiklamo nesitayela esihle kakhulu, amandla wokukhiqiza nokwakha osezingeni lomhlaba womklamo wobungcweti waseChina wase-20FT 40FT Sidelifter Truck Mounted Container Side Loader Lifter. ULoade, i-CCMIE yethu njengochwepheshe kulo mkhakha othile, sizibophezele ekuxazululeni noma yikuphi ukuthuthwa kwempahla okukhona nokulayisha nokukhipha izinkinga kubasebenzisi.
Izilayishi eziseceleni ezakhiwe ngobungcweti zaseChina, imithwalo eseceleni yokulayisha, yonke imishini engenisiwe ilawula ngempumelelo futhi iqinisekise ukunemba kokucubungula umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, sineqembu labaphathi nabachwepheshe abasezingeni eliphakeme, sakha izimpahla ezisezingeni eliphakeme, futhi sinekhono lokwenza imikhiqizo emisha yokwandisa izimakethe zethu zasekhaya nezangaphandle. Silindele ngobuqotho ukuthi amakhasimende achume ngenxa yebhizinisi lethu.
1) Akuvumelekile ukusebenzisa iTruck Mounted Container Side Loader Lifter ngaphansi kolayini wamandla kagesi aphezulu.
2) Qiniseka ukuthi isiza somsebenzi sandisiwe, ngaphambi kokuqala umsebenzi, qiniseka ukuthi ufunda indawo yokusebenza, izindlela eziya endaweni yokusebenza, ubukhona bezithiyo kanye nezindawo zeminye imishini.
3) Umhlabathi wesiza sokusebenzela kufanele uqine futhi ulingane, i-slope ingaphansi kuka-3% futhi indawo ayicwilisi ngesikhathi sokusebenza.
4) Nikeza ukukhanya okwanele ukuze ukunyakaza komshini nomthwalo kubonakale kahle.
Ukuqinisekisa ukuphepha emsebenzini, qiniseka ukwanelisa izidingo ezingezansi:
1) Ukushisa kwemvelo: -20 ° C ~ + 40 ° C;
2) Isivinini somoya asidluli ku-13.8m / s.
Olandelayo: Side Loader
Isitsha Esigcwele Sokufinyelela Isitaki
Isiphathi Sesitsha Esingenalutho-ZHD90C7